ဆီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး (၅)မိနစ်အတွင်း လုံးဝအရှင်း ပျောက်ကင်း သက်သာစေမည့် သဘာဝ ဆေးနည်း . . . - Thutasone
ဆီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး (၅)မိနစ်အတွင်း လုံးဝအရှင်း ပျောက်ကင်း သက်သာစေမည့် သဘာဝ ဆေးနည်း . . .
ဆီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး (၅)မိနစ်အတွင်း လုံးဝအရှင်း ပျောက်ကင်း သက်သာစေမည့် သဘာဝ ဆေးနည်း
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျ.. ဆီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး (၅)မီးနစ်အတွင်း လုံးဝအရှင်း ပျောက်ကင်း သက်သာစေမည့် သဘာဝဆေးနည်း အကြောင်းလေး ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
ဆီးနဲ့ပတ်သက်လာရင် ဆီးပူ ဆီးနီ ဆီးအောင့် ဆီးကျန် ဆီးသွေးပါ ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်း နှင့် အခြားသော ဆီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါတွေအတွက် သဘာဝေ ဆးနည်းတွေ အများအပြားရှိပါတယ်။
ဥပမာ အားဖြင့် နာနတ်ရွက်ြ ပုတ်သောက်ခြင်း လက်ဖက်ခြောက်ရေစိမ်သောက်ခြင်း ဆီးခုံပေါ်သို့ရေခဲတုံးဖိ့ကပ်ပေးခြင်း ကျောက်ဖရုံသီး ဟင်းချို ချက်သောက်ခြင်းသကြားကို ရေစိမ်သောက်ခြင်းဆန်ဆေးရေ ကိုသောက်ခြင်း နှင့် အခြားသော သဘာဝေ ဆးနည်းတွေ အများအပြားရှိပါတယ်။
ဆီးရောဂါနဲ့ပတ်သက်လာရင် အထက်ပါဖော်ပြပေးထားတဲ့ သဘာဝေ ဆးနည်းများထက် (၅)မီးနစ်အတွင်း ဆီးရောဂါအားလုံးကို ပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ သဘာဝဆေးနည်းရှိပါတယ်။
အရမ်းလွယ်ကူပါတယ် ကြက်သွန်နီ ဥကြီး (၁)လုံးကို အခွံခွာ၍ မလှီးဖြတ်မှီ ရေစင်အော င်ဆေးကြောပြီး ပါးပါးလှီးကာ ရေကျက်အေး(သို့)ရေသန့်သန့်ထဲကို ထည့်၍ သကြား လက်ဖက်စားဇွန်း(၃) ဇွန်းခန့်ဖြင့်ရောစပ်ပြီး အဖုံးအုပ်၍ တစ်နာရီခန့် စိမ်ထားပါ။ရေကို ကြက်သွန်ဖတ်များ မြုပ်အောင်ထည့်ပါ။များများ သောက်ချင်ပါက ကြက်သွန်နီများများ သကြားအချိုးကျထည့်၍ရေထပ်တိုးပြီးထည့်ပါ။
တစ်နာရီခန့်ကြာသော်…၄င်း ကြက်သွန်နီအရည်ကို ရေသောက်သကဲ့သို့ ဗိုက်ပြည့်အောင် များများသောက် သုံးပေးခြင်းဖြင့် အထက်ပါဖော်ပြပေးထားတဲ့ ဆီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ေ ရာဂါတွေကို သောက်ပြီးလို့ (၅)မီးနစ်ခန့်အတွင်း သိသာစွာပျောက်ကင်းစေပါသည်။
(မှတ်ချက်) ဒီနည်းအတိုင်းလုပ်ကြည့်လို့ မထူးခြားဘူး မပျောက်ဘူးဆိုရင် ဘဝခါးခါးကို အချိန်မရွေး အပြစ်ဆိုနိုင်ပါသည်။
ဆီးနဲ့ပတျသကျပွီး (၅)မီးနဈအတှငျး လုံးဝအရှငျး ပြောကျကငျး သကျသာစမေညျ့ သဘာဝ ဆေးနညျး
အားလုံးပဲ မင်ျဂလာပါ ခငျဗြ.. ဆီးနဲ့ပတျသကျပွီး (၅)မီးနဈအတှငျး လုံးဝအရှငျး ပြောကျကငျး သကျသာစမေညျ့ သဘာဝဆေးနညျး အကွောငျးလေး ဖျောပွပေးခငျြပါတယျ။
ဆီးနဲ့ပတျသကျလာရငျ ဆီးပူ ဆီးနီ ဆီးအောငျ့ ဆီးကနျြ ဆီးသှေးပါ ဆီးလမျးကွောငျး ပိုးဝငျခွငျး နှငျ့ အခွားသော ဆီးနဲ့ပတျသကျတဲ့ ရောဂါတှအေတှကျ သဘာဝေ ဆးနညျးတှေ အမြားအပွားရှိပါတယျ။
ဥပမာ အားဖွငျ့ နာနတျရှကျွ ပုတျသောကျခွငျး လကျဖကျခွောကျရစေိမျသောကျခွငျး ဆီးခုံပျေါသို့ရခေဲတုံးဖိ့ကပျပေးခွငျး ကြောကျဖရုံသီး ဟငျးခြို ခကျြသောကျခွငျးသကွားကို ရစေိမျသောကျခွငျးဆနျဆေးရေ ကိုသောကျခွငျး နှငျ့ အခွားသော သဘာဝေ ဆးနညျးတှေ အမြားအပွားရှိပါတယျ။
ဆီးရောဂါနဲ့ပတျသကျလာရငျ အထကျပါဖျောပွပေးထားတဲ့ သဘာဝေ ဆးနညျးမြားထကျ (၅)မီးနဈအတှငျး ဆီးရောဂါအားလုံးကို ပြောကျကငျးနိုငျတဲ့ သဘာဝဆေးနညျးရှိပါတယျ။
အရမျးလှယျကူပါတယျ ကွကျသှနျနီ ဥကွီး (၁)လုံးကို အခှံခှာ၍ မလှီးဖွတျမှီ ရစေငျအော ငျဆေးကွောပွီး ပါးပါးလှီးကာ ရကေကျြအေး(သို့)ရသေနျ့သနျ့ထဲကို ထညျ့၍ သကွား လကျဖကျစားဇှနျး(၃) ဇှနျးခနျ့ဖွငျ့ရောစပျပွီး အဖုံးအုပျ၍ တဈနာရီခနျ့ စိမျထားပါ။
ရကေို ကွကျသှနျဖတျမြား မွုပျအောငျထညျ့ပါ။မြားမြား သောကျခငျြပါက ကွကျသှနျနီမြားမြား သကွားအခြိုးကထြညျ့၍ရထေပျတိုးပွီးထညျ့ပါ။
တဈနာရီခနျ့ကွာသျော…၎င်းငျး ကွကျသှနျနီအရညျကို ရသေောကျသကဲ့သို့ ဗိုကျပွညျ့အောငျ မြားမြားသောကျ သုံးပေးခွငျးဖွငျ့ အထကျပါဖျောပွပေးထားတဲ့ ဆီးနဲ့ပတျသကျတဲ့ေ ရာဂါတှကေို သောကျပွီးလို့ (၅)မီးနဈခနျ့အတှငျး သိသာစှာပြောကျကငျးစပေါသညျ။
(မှတျခကျြ) ဒီနညျးအတိုငျးလုပျကွညျ့လို့ မထူးခွားဘူး မပြောကျဘူးဆိုရငျ ဘဝခါးခါးကို အခြိနျမရှေး အပွဈဆိုနိုငျပါသညျ။
အမည်ပြောင်း၊နေရပ်ပြောင်းအတွက် ၊နယ်ဝင်/နယ်ထွက် ဆောင်ရွက်မှု ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်လာစရာမလိုတော့ …..